Accueil > Newsletters > Filazam-baovao faha-120
« Newsletter n° 120
Newsletter n° 120 [ENG] »
Na teo aza ireo antso maro nataon’ireto fikambanana avy amin’ny fiaraha-monim-pirenena manao sonia eto ambany ireto, ho fanohanana ny fanoherana ara-drariny ataon’ireo mponina ao amin’ny manodidina an’i Toliara voakasiky ny tetikasa fitrandrahana Base Toliara mivantana, dia minia marenina tsy mandre ny fahorian’izy ireo ny tompon’andraikitra malagasy ary maneho fanamavoana ny fotokevitra momba ny fangatahana mialoha ny faneken’ny mponina amin-kahalalahana sy am-pahalalàna feno (consentement libre, préalable et éclairé) sy ny zon’ny mponina eo amin’ny tany izay eken’ny lalàna.
Ny faha-2-n’ny volana mey 2019, dia tonga nanatanteraka fampigadràna mpikambana 30 avy ao amin’ny fokonolona Benetse sy Ampototse ary Tsiafanoka ny herim-pamoretana, satria izy ireo voapanga ho nanohitohina ny toeram-piasàn’ny Base Toliara ao Ranobe nefa hono ireo toerana ireo mitoetra eo amin’ny tanim-panjakàna. Dia nentin’ny heri-pamoretana an-keriny nankany Toliara ireo olona ireo.
Amin’izao fotoana izao, navotsotra ny 21 tamin’izy ireo, ny sivy (09) kosa dia mbola voatazona am-ponja ary toa nentina any amin’ny toeran-kafa.
Noho ny antso nataony tamin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny mpandray fanapaha-kevitra eo amin’ny Fitondram-panjakàna taminy 20 avrily teo ny mba handraisan’izy ireo fanapaha-kevitra izay afaka hanaporofoana amin’ireo fokonolona voakasika mivantana fa heno ny fangatahany ary hajaina ny zony fototra, dia amin’alahelo lehibe no hanamarihan’ny fikambanana avy amin’ny fiaraha-monim-pirenena CRAAD-OI sy fikambanana TANY fa ny valiny nasetry io antso io dia famoretana indrindra indrindra ary fanitsakitsahana ny zon’ireo fokonolona eo amin’ny taniny sy ny loharanon-karena voajanahary.
Maneho ny alahelonay manoloana ireo tranga mampanahy izay tsy maintsy hanaovana fikarohana mba hampazava azy ireo izahay, mba tsy hisian’ny famiraviràna, ka hatramin’ny filazàna vaovao tsy marina hanasoketàna ireo miaro ny zo sy tombotsoan’ny mponina any an-toerana. Raha dinihina ny fanambaràna nataon’ny olona sasany tany amin’ireo tatitra an-tsary samihafa teo amin’ny fahita-lavitra momba ity raharaha ity, dia zava-dehibe ny filazàna fa ny olona tokana izay nilaza fa nanao ireo fanimbàna ny fananan’ny tetikasa Base Toliara dia tsy voasambotra, na dia niaraha-nahita aza ny zavatra nataony.
Momba ity raharaha ity koa, dia tianay ny mampahatsiaro ireo tompon’andraikitra mahefa fa ny lalàna manan-kery dia milaza fa ny mponina dia manana zo fananantany amin’ny tany izay novoleny mandritry ny am-polotaonany maro, izay izany no zava-miseho amin’ny fokonolona voakasiky ny tetikasa Base Toliara, na tsy manana taratasy ofisialy (titra sy karatany ohatra) manamarina ny fananany ny tany aza izy.
Meloinay ny velikibay asetry ny ezaka ataon’ireo mpikambana ao amin’ny fokonolona hiarovany ny zony, ary miaraka amin’ireo mponina ao Benetse sy Ampototse ary Tsiafanoka an’arivony maro izay tonga tao Toliara hanohana azy ireo, dia mitaky amin’ny fomba hentitra izahay :
ny famoahana tsy misy hatak’andro ireo olona 9 voagadra any amin’ny toerana tazonina ho miafina ;
ny fanajàna ny fananan’izy ireo zo amina fitsaràna manaja ny rariny sy ny hitsiny ary tsy mitanila, ary ny fananany zo amin’ny fiarovana azy ;
ny fampitsaharana ny famoretana ireo mpanao hetsika ho fanohanana azy ireo
ary ny fanomezana fahafaham-po ny fitakiany
5 mey 2019
Filambanana TANY miaro ny tany malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY